जसको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो सैनिक विद्रोह भयो – Nepali Digital Newspaper
काजी दामोदर पाँडेका साहिला छोरा रणजङ पाँडे, जन्म वि.सं. १८४५ तिर काठमाडौंमा भएको थियो । आफ्ना पिता भद्रकालीमा काटिएपछि उनी वि.सं. १८६१ मा रणबम पाँडेसँग भारततर्फ गएका थिए । वि.सं. १८७२ सालमा नेपाल फर्केका यिनले गठन गरेको ‘वार पार्टी’ले भीमसेन थापा र अङ्ग्रेज राजदूतलाई समेत हायलकायल पारेको थियो । भीमसेन थापा मुख्तियार पदबाट हटेपछि यिनी रङ्नाथ र पुष्कर शाहहरूको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री, प्रधानसेनापति, मुख्यमन्त्री र वि.सं. १८९६ को पुसमा प्रधानमन्त्री (मुख्तियार) भए । त्यसबेला यिनी ५० वर्षका थिए ।
रणजङ पाँडेको मुख्तियारी कालमा दुई महत्वपूर्ण घटनाहरू घटे । पहिलो नेपाली सेनाको विद्रोह र दोस्रो भारतको रामनगरमा नेपाली फौजको आक्रमण थियो । रणजङ पाँडे मुख्तियार हुँदा देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । राज्यकोषमा रकम थिएन । रणजङले राज्यकोष वृद्धि गर्न आफ्नो नामको जग्गा राष्ट्रलाई सुम्पे । यस्तो आर्थिक सङ्कटको समयमा पनि रणजङले नेपाली सेनामा नयाँ भर्ना गरे । यसरी सेनामा नयाँ भर्ना गर्नुका दुई प्रमुख कारणहरू रहेका थिए ।
पहिलो कारण रणजङ पाँडे सेनामा नयाँ भर्ना गरेर आफ्नो शक्ति बढाउन चाहन्थे । दोस्रो कारणमा अन्य भारदारहरू जस्तै यिनी पनि अङ्ग्रेजसँग पुनः युद्ध गरेर नेपालले पहिलेको युद्धमा गुमाएको भूभाग फेरि फिर्ता गराउन चाहन्थे । यसरी सैनिक सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहँदा पुराना फौजहरूले चाहिँ दुई वर्षदेखि तलब पाइरहेका थिएनन् । यसैबीच सेनाको तलब घटाइँदैछ भन्ने हल्ला चल्यो । यस हल्लाबाट उत्तेजित भएर २१ जुन १८४० मा ६ हजार नेपाली सेनाको फौज टुँडिखेलमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रियो । नेपाली फौजको तलब घटाउनमा अङ्ग्रेजज राजदूत ब्रेन हगटन हडसनको पनि हात छ भन्ने आशङ्कामा विद्रोही फौजले दूतावासलाई घेराबन्दी गर्‍यो तर त्यहाँ लुटपाट मच्चाउनचाहिँ सकेन ।
त्यसपछि उत्तेजित भीडले चौतरिया पुष्कर शाह, रङ्गनाथ पौडेल, कुलराज पाँडे, करवीर पाँडे आदिका घरहरू ध्वस्त पारे । कसैले पनि सैनिक आक्रोशलाई शान्त पार्न नसकेपछि राजा राजेन्द्रले आक्रोशित सेनाहरूसमक्ष उपस्थित भई सैनिकहरूको तलब पूरा दिने र अन्य कुनै पनि किसिमको कदम लिने आश्वासन दिए । त्यसपछि राजा राजेन्द्रले अङ्ग्रेजलाई पठाएको सन्देशमा ‘ब्रिटिस नेपालभन्दा धेरै शक्तिशाली छ, त्यसकारण उनीहरूसँग हामीले सन्धि गरी मित्रता कायम गर्नुपर्छ । अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्न हामीलाई ठूलो मात्रामा धनको खाँचो परेको छ । त्यसैले २ वर्षका लागि मात्र तलब घटाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो’ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राजाको सन्देशको प्रतिउत्तरमा सेनाले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्नुपर्छ, हाम्रो भू–भाग फिर्ता लिन्छौँ, हडसनलाई नेपालबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्रेषित गरेको थियो । वास्तवमा यो नै नेपालको इतिहासमै पहिलो सैनिक विद्रोह थियो ।
रणजङ पाँडेको मुख्तियारी कालमा भएको अर्को महत्वपूर्ण घटना नेपाली सेनाको रामनगरमाथिको आक्रमण थियो । अङ्ग्रेजहरू प्रथम अफगान युद्ध र चीनमा अफिम युद्धमा संलग्न भएको मौका पारेर फौजदार जसवीर रानाको नेतृत्वमा सय जवान नेपाली फौजले उत्तरी विहारको बेतिया जिल्लामा पर्ने रामनगरको साथै एकानब्बे गाउँहरूमा आक्रमण गऱ्यो । १८७२ पछि भारतमाथि नेपालले आक्रमण गरेको यो पहिलोपटक थियो । तर अङ्ग्रेजको दबाबका कारण नेपालले रामनगरबाट बाध्य भएर आफ्नै फौज हटाउनुपऱ्यो । अङ्ग्रेज सरकारले यी सबै घटनाहरूको दोष मुख्तियार रणजङ पाँडेलाई लगाएपछि राजा राजेन्द्रविक्रमलाई दबाब पर्न थाल्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाह सायद यसै अवसरको प्रतीक्षामा थिए किनकि पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा उनलाई रणजङ पाँडेको बदमासी र भीमसेन थापाको निर्दोषिताको कुराको ज्ञान भइसकेको थियो । यिनले रणजङ पाँडेलाई पदमुक्त गरिदिए ।
रणजङ पाँडेलाई पदमुक्त गरेपछि राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले चौतारिया फत्तेजङ शाहलाई मुख्तियार पदमा नियुक्त गरे । तर स्वभावैले कमजोर फत्तेजङ मन्त्रिमण्डलले पनि कुनै चमत्कार गर्न नसकेपछि वि.सं. १९०० वैशाख ६ गते भारत प्रवासबाट नेपाल भित्र्याइएका माथवरसिंह थापा वि.सं. १९०० साल पुस ५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री एवम् प्रधानसेनापति पदमा मनोनीत भए । निर्दोष भीमसेन थापालाई दण्डित गरी थापा परिवारलाई नै समाप्त गर्ने पाँडेहरूसँग बदला लिने सुनौलो अवसर यिनले चुकाएनन् । पाँडेहरूको अपराध प्रमाणित भएपछि काजी रणबम, करवीर, कुलराजलगायत पाँडेहरू काटिए । रोगले मरणान्त भएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रणजङलाई उनका भाइ–छोराहरूको लास देखाउन लगियो । त्यसको केही समयपछि रणजङ आफै कालगतिले मरे ।
(‘नेपालका प्रधानमन्त्री’/यम चौलागाईं)